Mr. Kurt Campbell နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ သုံးဦး ပုံကို လျှပ်တပြက် ဝိုင်းတော်သားတွေ ဖိုတိုရှော့နဲ့ သုံးပြီး ပြည်သူကို လိမ်လည်ခြင်းလား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Mr. Kurt Campbell နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ သုံးဦး ပုံကို လျှပ်တပြက် ဝိုင်းတော်သားတွေ ဖိုတိုရှော့နဲ့ သုံးပြီး ပြည်သူကို လိမ်လည်ခြင်းလား ?
Mr. Kurt Campbell နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ သုံးဦး ပုံကို လျှပ်တပြက် ဝိုင်းတော်သားတွေ ဖိုတိုရှော့နဲ့ သုံးပြီး ပြည်သူကို လိမ်လည်ခြင်းလား ?
Posted by Bayote on May 18, 2010 in Myanma News, News | 23 comments
Mr. Kurt Campbell နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ သုံးဦး ပုံကို လျှပ်တပြက် ဝိုင်းတော်သားတွေ ဖိုတိုရှော့နဲ့ သုံးပြီး ပြည်သူကို လိမ်လည်သတင်းထုတ်ပြန်နေတာပါ။ ပြည်သူဆီက အခကြေးငွေယူပြီး မှန်ကန်တဲ့ သတင်းမထုတ်ပြန်ရဲရင် ပုံမှန်အတိုင်း ဘုရား သွားကျောင်းတက် သတင်းပဲ ဂျာနယ်မှာ ထည့်ပါလား။
Source : http://www.humanright-myanmar.com/2010/05/blog-post_146.html
ဂျာနယ်များသည် မူရင်းပုံပြင်ဆင်ကာ အများအထင်လွဲအောင် မလုပ်သင့်ဟုထင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ဂျာနယ် တစ်စောင်အနေဖြင့် Photoshop ဖြင့်မပြင်သင့်ပါ။ သည်သတင်းတာ မှန်ခဲ့ယင် အဆွေတို့ လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။
မှန်ကန်တဲ့သတင်းလေးတွေပဲပေးစေချင်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေကိုတော့ မညာသင့်ပါဘူး။ မပြောချင်လဲနေလေ။ ပြောပြမှတော့ မှန်ရာလေးတွေပဲပြောပေါ့ကွယ်. ပြည်သူတွေကို မညာစေချင်ပါဘူးကွယ်။ အလိမ်အညာတွေကပေါ။ အကျင့်စာရိတ္တတွေက မကောင်းတော့ ရာသီဥတုတွေလည်း မမှန်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်။။
သြော်….ဂျာနယ်….ဂျာနယ်….. ဘယ်ဂျာနယ်မှ မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပါရောလား….
Devil for Na-Ak-Pha says:
ုပုံနှစ်ပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အောက်ကပုံကို ရိုးရိုးတန်းတန်းကြည့်ရင်တောင် မြင်နိုင်ပါတယ်
ဖြတ်ထားတာ သိသာလွန်းပါတယ် brain တောင်သုံးစရာမလိုပါဘူး
I can’t believe under one
It is obvious that cut from original one.
လုံးဝကို မလုပ်သင့်ပါဘူး…. နာမည်ကြီးသတင်း Media ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အတင်းအမှန်တွေပဲ ပေးသင့်ပါတယ်…
ရှိတာကို ဖျက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မရှိတာကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် …
ကဲ လုပ်စရာရှိတာသာလုပ်.. ပီပြင်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်…
Bayote’s good new
သတင်း media သမားတွေ medium ပဲနေကြရင်ကောင်းမယ် ဒီလို ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့ အတုလုပ်တာကတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်။
အေဗျာ ဘယ်ကောင်းမလဲဗျ တော်ကြာဘလော့ကမျှားခေါ်နေတာမလားလို့ထင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့နာမည်အရင်းပဲပေးပါတယ် ဟဲဟဲ
အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေက သတင်းမှန်ရဖို့ journal ကို အားကိုးပါမှ journal ကပါ သတင်းမှန်မပေးရင် ပြည်သူတွေဆီက ငွေတွေကို လိမ်ယူနေတာပဲ…….. ကျန်တဲ့ journal တွေလဲ အတု ယူကြပါလို့……..
သူတို့လည်း သူတို့အကြောင်းနဲ့ပေါ့ကွာ…တချိန်ချိန်တော့ မျှော်လင့်ရတာဘဲလေ..ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိသေးဘူး…
နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အနေနဲ့လည်း မလိမ်လည်ဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် သတင်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဟေးးးးး
ငါတို့မှာလည်း ဘယ်ဖက်လိုက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရပြီ…ဆန်ကောထဲထည့်လိမ့်တဲ့ ဂေါ်လီလို ဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်ဖြစ်နေကြပြီ.
ခက်တာက စာပေစီစစ်ရေးပါပဲ..။ ဟိုဟာ မထည့်ရ။ ဒီဟာဖြတ်ပေးပါနဲ့။ လုံးဝဖြတ်လိုက်လဲ ကောင်းတာပေါ့။ ခုတော့
သူတို့ကဘဲပြောသေးတယ်ပြည်ပသတင်းဌာနတွေကိုဘာတဲ့ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒတွေဆိုဘဲ …
ဒါမှ တို့ ဦးဗရုတ် ကြီးကွ။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်လား။
သူတို့ လည်းအစိုးရ လခစားတွေဖြစ်မှာပေါ့ ဒီလောက်တောင်ကြောက်နေတာ၊ ဒီလို ဂျာနယ်များများရှိလေ တိုင်းပြည်နာလေပဲ။
Lyatapyat shows its journalism status by creating and using such photo in their journal.Such kinds of journals are rubbish and they are distorting the meaning of press freedom which is fragile and not totally nurtured yet here in Myanmar.